UManuel Ramirez | | CSS, HTML
Amaxesha amisiweyo okanye amaxesha yenye yezinto ezongezelelekileyo esinokuzenza ukudibanisa kwiwebhusayithi ukubonisa inkqubela phambili okanye indaleko kwiminyaka yenkampani okanye yenkampani. Inkcazo ebonakalayo ebonakalayo ebonisa ukuba uyazi ukuyila ngobunono ngokuchwetheza kunye nezinto ezibonakalayo, inokubonisa amanyathelo athathwe yinkonzo okanye ngemveliso ekuhambeni kwexesha.
La maxesha ma-29 oza kuwafumana apha ngezantsi ukusuka kumaxesha amisiweyo Njengokuba kungaphezulu. Uyakufumana eyona ilungele iimfuno zakho ukuyifumana kwiphepha lewebhusayithi olilungiselela umthengi okanye elakho. Sihamba nengqokelela yamaxesha amnandi kakhulu anomdla kakhulu.
1 Umda ngokuskrola
2 Umda wexesha kwiCSS
3 Isilayida esiphendulayo
4 Umda wexesha ophambili
5 Umda wexesha kunye nesihloko esisigxina kunye neFlexbox
6 Umda wexesha leprojekthi
9 Uluhlu lwexesha elithe nkqo
10 Umda wexesha kwiFlexbox
11 Umda wexesha kwi-DIV
12 Umda wexesha kwi-CSS nakwi-HTML
13 Izimvo kunye nexesha lokunika ingxelo
14 Umda wexesha kusasa kwi-HTML nakwi-CSS
15 Ixesha le-UI
16 Umda wexesha kwi-CSS kuphela
17 Umda wexesha ophendulayo V3
18 Umda wexesha obekwe ngombala
19 Ixesha lokuphendula kwimbali
20 Umda wexesha weqela
21 Umda wexesha we-CSS kunye ne-HTML
22 Umda wexesha we-CSS, HTML kunye slick.js
23 Ulandelelwano lwexesha V1
24 Umda wexesha oxwesileyo we-CSS CSS
25 Ixesha leCodyhouse
26 Umda wexesha oxwesileyo
27 Umda wexesha ongachazwanga
28 Umda wexesha
29 Olunye ixesha elithe tyaba
Umda wexesha kwiCSS
Eli xesha lisebenzisa ikhowudi yeCSS ukuze ikwazi ukuqwalaselwa ngokufanelekileyo kwezinye iipropathi zayo. Ayinaskroli njengangaphambili, kodwa ibonakaliswe ngothotho lweebhokisi kunye nombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuyinika enye into ebabazekayo kwaye yongeze kuluhlu lwamaxesha kolu papasho.
Umda wexesha ophambili
Umda wexesha kunye nesihloko esisigxina kunye neFlexbox
Ikhowudi ye-HTML kunye ne-CSS yesihloko esisigxina izakuhlala ilungisiwe ngalo mzuzu siskrola kwiphepha. Ngobuqili obukhulu bokuba ngumda wexesha lomdla omkhulu kuye nawuphi na umphuhlisi wangoku ofuna ukuphuma kwimigangatho yoyilo lwewebhu yangoku.
Umda wexesha leprojekthi
Eli xesha lisebenzisa i-CSS kunye ne-HTML ukubonisa ubalo maxesha olubalulekileyo onokulusebenzisela elo xesha elithile Iprojekthi. Njengoko siskrola ihamba ngeentsuku zeveki, ke ilungile ukuyiphumeza kwizixhobo zokusebenzisana ezenziwe yinkampani uqobo.
IHyperloopu ngumda wexesha Endaweni yokuba uyile uyilo olusetyenzisiweyo kunye nokungacwangciswa kwanto ngaphandle kwe-HTML kunye neCSS. Iphawulwa ngokusetyenziswa kobungakanani obahlukeneyo kwifonti yokubhaliweyo kunye nomgca wokuma kunye noluhlu lweebhokisi eziphawula umzuzu ngamnye obalulekileyo wexesha.
Uluhlu lwexesha elithe nkqo
Umda wexesha lokuphumla Ukuzihambela kude nabanye ngokuphatha kwakhe ezibonakalayo. Inemvelaphi yangoku yegradient kuyilo kunye noluhlu lweebhokisi eziphawula ixesha ngalinye lolo. Ihlelwe kwi-CSS nakwi-HTML.
Umda wexesha kwiFlexbox
Elinye lamaxesha agqityiweyo agqityiweyo kwaye isekelwe kumakhadi ukubandakanya lonke ulwazi esiludingayo ngelixesha lokuphumla. Ikwaphuhlisiwe kwi-HTML nakwi-CSS, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba onke amakhadi kufuneka abe nokuphakama nobubanzi obufanayo ukubala indawo yezikrini ezinkulu.
Umda wexesha kwi-DIV
Umda wexesha omncinci kuyilo kwaye ibikhona iphuhliswe kuphela kwi-HTML nakwi-CSS, Ke ukumiliselwa kwayo kungakhawuleza kakhulu. Kukulungele ngokufanelekileyo ukubonakalisa ixesha elifanelekileyo kulwazi oluphakathi ngenxa yokugqitywa kwemonochrome.
Umda wexesha kwi-CSS nakwi-HTML
Ungabeka Imifanekiso emikhulu engama-400 × 300 kolu luhlu lwexesha olwahlula ngombala oluhlaza wemigca kunye nokubhaliweyo kwemihla neentsuku. Ayinazo oopopayi kwaye ibonakaliswe kuyilo olulula kuwo onke amanqanaba.
Izimvo kunye nexesha lokunika ingxelo
Umda wexesha ohluke kakhulu kwabanye wokuvumela beka amakhadi aneefoto zabasebenzisi, okanye ubuncinci yile njongo ekuqaleni. Ngestayile esihle sokubonakalayo, amakhadi asebenzisa ukufakwa komda wexesha elifanelekileyo ngaphandle kweempopayi.
Umda wexesha kusasa kwi-HTML nakwi-CSS
Umda wexesha ogqibeleleyo wokuphendula ibonakaliswa ngokuba yi-HTML, CSS kwaye unikeze ixesha elifanelekileyo kodwa elilula kakhulu.
Le khowudi kwi-HTML nakwi-CSS isebenza ngokugqibeleleyo thaca usuku lokusebenza yomthambo. Iyaphendula ngomfanekiso oyintloko kunye noluhlu lwamaqhosha alubonisa ngokucacileyo nangokucocekileyo kwimbonakalo.
Umda wexesha kwi-CSS kuphela
Eli xesha libonakaliswe ngokuba kwi-CSS kunye ne uthotho lwemibala ekhethwe kakuhle: bomvu kwaye luhlaza. Luhlaza ukulenza iphepha lonke ngokupheleleyo, limhlophe ngombhalo kunye nokwahlula imigca, kwaye bomvu ukwahlula ixesha esikulo. Singacofa kwikhefu ngalinye ukulibeka kunye nebhokisi elijikelezileyo kwaye iligqamise.
Umda wexesha ophendulayo V3
Umda wexesha obekwe ngombala
Ixesha lokuphendula kwimbali
Umda wexesha weqela
Umda wexesha we-CSS kunye ne-HTML
Yenziwe nguye eyaziwa ngokuba yi-Envato Tuts +, sinikwa umda wexesha othe tye nothotho lwamakhadi acocekileyo kunye nalawo kuyilo. Imibala e-Flat kunye nelayini ethe tyaba ngothotho lwamachaphaza abomvu adibanisa isithuba ngasinye.
Umda wexesha we-CSS, HTML kunye slick.js
Iithoni zePastel kuyilo lwexesha elifanelekileyo imele ukuboniswa komfanekiso ngamnye bonisa ixesha ngalinye lekhefu. Lutshintsho phakathi kwemifanekiso nganye kunye nezikhewu ezenza ukuba umgca wexesha ubonakale.
Ulandelelwano lwexesha V1
Umda wexesha obonakalayo amaqhosha kulayini ngamnye wokuma nkqo kwikhefu ngalinye lokunxibelelana nomfanekiso opheleleyo ongasemva rhoqo xa sicinezela kwelinye.
Umda wexesha oxwesileyo we-CSS CSS
Awuyi kuba nakho ukunqakraza naphina kolu luhlu lwexesha lubonakaliswe yi uyilo olumnandi ngokukhetha ngobulumko kwephalethi yombala kunye noluhlu lweesandwich nganye yexesha ngalinye. Akukho mifanekiso, kodwa ngokubonakalayo iyathandeka emehlweni.
Umda wexesha oxwesileyo
Umda wexesha ongachazwanga
Umda wexesha omnyama kuphela kuluhlu olusezantsi. Emva koko usebenzisa imibala eyahlukileyo yokwahlula unyaka netekisi ngaxeshanye nemida yayo. Inopopayi obalaseleyo wokudlula phakathi kwesicatshulwa ngasinye.
Olu luhlu lwexesha lubeka Ukugxininisa kumbala oluhlaza ukuma ngokupheleleyo.
Olunye ixesha elithe tyaba
Ku nokuba njalo beka umfanekiso kufutshane nekhusi elipheleleyo yexesha elibonakalayo lokusetyenziswa kweblue kunye grey kunye noluhlu lwesangqa esimele unyaka nonyaka.
Ungaphoswa Olunye uthotho lweemenyu kwiCSS nakwi-HTML.